Tag: mailaka wordpress | Martech Zone
Tag: mailaka wordpress
Zoma, Desambra 4, 2015 Zoma, Desambra 4, 2015 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo orinasa dia nanana sehatra izay nitazomana mivantana ny fampiasan'ny mpanjifa ny fampiasan'izy ireo ilay sehatra. Raha tsorina, ireo mpanjifa nampiasa azy dia nahita fahombiazana lehibe. Niala ireo mpanjifa nitolona. Tsy fahita izany amin'ny vokatra na serivisy rehetra. Vokatr'izany dia nanamboatra andian-mailaka marobe izahay izay nampianatra sy nanery ny mpanjifa hanomboka ny fampiasana ny sehatra. Nanome azy ireo horonantsary momba ny fomba ahoana ary koa a
Telo taona lasa izay, izaho sy i Adam Small dia nipetraka tao amin'ny magazay kafe ankafizinay ary nilaza izy fa sarotra ny mampiditra serivisy serivisy amin'ny mailaka. Niasa tao amin'ny ExactTarget aho ho mpanolotsaina fampidirana ka fantatro tsara ireo fanamby. Adam sy ny vadiny dia nanangana Agent Sauce, sehatra fivarotana varotra trano izay nitombo ary nandefa mailaka an'aliny isan-kerinandro. Ny olana dia io mailaka io